Image ရှာဖို့ ခေါင်းစားနေပါသလား? -
Image တွေဟာ Content Marketing ရဲ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်ဆို လဲမမှားပါဘူး။ Imageတွေဟာကျွန်တော်တို့ Post တွေကို Social Media News Feed တွေမှာလူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းရရှိစေရန် အများကြီးကူညီပေးနိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာပုံ တစ်ပုံပြုလုပ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူ၊ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သူ၊ ပုံပြုပြင်ရန်အခက်အခဲရှိသူဖြစ်နေပါက ပုံတွေကို Download လုပ်နိုင်တဲ့ Website တွေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Website တွေက အခမဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက် ဈေးကြီးကောင်းကြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အမိုက်စားပုံတွေကိုလည်း အလကား Download လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်အောင် Free Stock Photo တွေရနိုင်မယ် Website တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီ Website လေးက Resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ ပုံတွေကို Free Download လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ Category လည်း စုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့ အတွက် နှစ်သက်ရာပုံတွေကို ရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Website လေးမှာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Website လေးမှာဆိုရင် ကိုလိုချင်တဲ့ Category ကိုရှာပြီး ရွေးချယ်ရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီပုံလေးတွေက ဝါသနာရှင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေက တင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ Image ရှာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ သူတွေ အတွက်တင်ပေးထားကျတာပါ၊ ကိုယ်ကလည်းတင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Free Join ဆိုတဲ့ Button မှာ အကောင့်ဝင်ပြီး Image တွေတင်ပေး လို့ရပါတယ်။ Account ပြုလုပ်နည်းကလဲ Facebook, Gmail တို့နဲ့ Free ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရတာလဲအဆင်ပြေတဲ့ Website လေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Website လေးကလဲ Image အမိုက်စားလေးတွေကို Free Download လုပ်နိုင်မယ့် Website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Website မှာက Free လဲ Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အဲ့ဒီထက်ပိုလန်း ပို မိုက်တဲ့ Image တွေကို ရချင်တယ်ဆိုရင် Premium Membership ပါဝင်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Image တွေကလဲ Quality ကောင်းတဲ့ Image တွေဖြစ်ပြီး Category တွေလဲစုံစုံလင်လင်ရှိ တဲ့ အတွက်ကြောင့် User တွေစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီ Website လေးကတော့ ၁.၄သန်းသော Photos, Illustrations, Vector Graphics, Videos စတာတွေကို Free Download ရယူနိုင်မဲ့ Website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Website က Image တွေက Category စုံပြီး တော်တော်လေးကို မိုက်ပါတယ်။
ဒီ Website ထဲမှာ Image တွေကို Free Download လုပ်နိုင်ပြီး၊ Email နဲ့ Subscribe လုပ်ထားပြီး Latest Image Update တွေအသစ်ရောက်ရင် Noti လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် User တွေအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီ Website ကတော့ Creative Image ပေါင်း ၃၅၀၀၀ ကျော်ကို Commercially ယူသုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Category တွေလဲစုံစုံလင်လင် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် User တွေစိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Thursday December 20th, 2018/ Blog/0Comment
Canva နဲ့ အမိုက်စား Image Design တွေကိုဖန်တီးမယ်
ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ရှိလာတဲ့ Twitter ရဲ့ Night Mode
Business အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Facebook Marketing နည်းလမ်းများ
အောင်မြင်တဲ့ Social Media Marketing ဖြစ်လာစေမယ့် အချက်များ
ဘာကြောင့် Facebook Advertising ကိုအသုံးပြုလာကြတာလဲ?
Copyright © SEOMyanmar 2019. All Rights Reserved